Shiinaha Custom cabirkiisu yahay taallo qurux badan oo shabeel ah oo iib ah Soo-saar iyo Warshad | Farshaxan Fiican
Lambarka Moodalka: FMI-216
Shabeelka jirkiisu waa haybad, xoog iyo dherer, leh dhogor qurxoon, madax wareegsan, dhunkasho ballaadhan, indho waaweyn, iyo gadh cad oo garka madow leh dhinaca afka, oo dhererkiisu yahay 15 cm. Qoorta waa cufan tahay oo gaaban tahay, ku dhowaad ballac sida garbaha. Garbaha, laabta, ubucda, iyo badhida waa cidhiidhi, siman yihiin dhinacyada, addimada adag, ilkaha cananaanta aad u fiiqan iyo cidiyaha, iyo af dheer oo afka adag.
Shabeelka taallada ku jira ayaa leh afar lugood oo adag. Ciddiyihiisa ayaa farta lagu fiiqayaa, indhihiisuna waa furan yihiin. Afka qaar baa gadh ku hareeraysan, ilkihiisa waaweynina waa mindi oo kale.
Lugihiisa adag, dhumuc weyn leh iyo labada indhood ee wax daloolinaya waxay u muuqdaan kuwo sharaf leh.
Taaladaan quruxda badan waxay sawireysaa shabeel daran, oo fiirineysa muuqaalka ka hooseeya qafiska daaqadda. Shaqadan cajiibka ah waxaa lagu xardhay marmar cajaa'ib leh, taasoo ka dhigaysa farshaxanku mid aad u qurux badan.
Hore: Taallo qurux badan oo midabkeedu yahay caddaan qurux badan oo iib ah
Xiga: Taallo libaax leh oo qaabeysan oo loo qaabeeyey
Sawirro libaax madow oo gacanta lagu sameeyay
Taallo goonni ah oo loo habeeyay iib ahaan
Natuarl libaax madow oo madow leh baalal iib ah